सन्दिपको राम्रो बलिंगका बाबजुद दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले टोरोन्टो डीएल मेथडमा २ रनले पराजित – WicketNepal
सन्दिपको राम्रो बलिंगका बाबजुद दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले टोरोन्टो डीएल मेथडमा २ रनले पराजित
Birat Jung Rayamajhi, २०७६ श्रावण २४, शुक्रबार ०६:१९
टोरोन्टो नेसनललाई २ रनले ( डीएल मेथड ) पराजित गर्दै विन्नीपेग हक्स ग्लोबल टि-२० क्यानडाको दोश्रो क्वालीफायरमा प्रवेश गरेको छ। भोलि हुने दोश्रो क्वालीफायरमा विन्नीपेगले फाइनल प्रवेशको लागि ब्राम्पटन वुल्भ्सको सामना गर्नेछ।
रोमान्चक खेलमा पहिले ब्याटिंग गर्दै टोरोन्टोले दिएको २३९ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा १७.१ ओभरमा विन्नीपेगले ५ विकेट गुमाएर २०१ रन बनाएको थियो। यही अवस्थामा मैदानमा प्रकासको अवस्था निकै कम हुँदा खेल रोकिन पुग्यो। मैदान अन्धकारको अवस्थामै त्यही रहेपछि अम्पायरले खेलाडीको सुरक्षालाई ध्यान दिंदै खेल निरन्तरता दिएनन् र डीएल मेथडमा दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले २ रनले विन्नीपेग विजयी हुन पुग्यो।
.@WinnipegGT20 win the eliminator by2runs (DLS) and will play @BramptonWolves in the 2nd qualifier on Saturday. #GT2019 #TNvsWH @TorontoNational pic.twitter.com/nF3qDURAWd
डुमिनिको उत्कृस्ट ब्याटिंग
लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विन्नीपेगको सुरुवात राम्रो हुन सकेन। शैमन अनवर ५ , उमर अकमल १ तथा क्रिस लिन २१ रन बनाएर आउट हुड्ना ४ ओभरमा स्कोर ४९/३ पुग्यो। अकमललाई दोश्रो ओभरको पहिलो बलमै सन्दिपले स्टम्प आउट गराए।
त्यसपछि दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेटर जेपी डुमिनिले चौथो नम्बरमा आएर उत्कृस्ट इनिंग खेले। उनले चौथो विकेटको लागि सन्नी सोहलसंग ९० रनको साझेदारी गरे। सोहललाई १३ औं ओभरमा सन्दिपले क्याच आउट गराउदै साझेदारी तोड्दै टोरोन्टोलाई खेलमा फर्काएका थिए। लगत्तै हेम्जा तारिक ५ रन बनाएर पोलार्डको बलमा आउट भए।
१४ औं ओभरमा १४६/५ हुँदा टोरोन्टो खेलमा हावी हुनसक्ने देखिएको थियो तर डुमिनिले त्यसपछि कप्तान रायद इमरितसंग साझेदारी गर्दै टिमलाई जिततिर डोर्याए।
१७.१ ओभरमा खराब प्रकासले खेल रोकिन पुग्यो। डीएल मेथडमा ३ रनले विन्नीपेग अघि रहेको थियो। १७ औं ओभरमा रायड इमरिटले क्रिस ग्रिनको एकै ओभरमा २ छक्का र १ चौका मदतले १८ रन बनाए। सोहि ओभरको कारण विन्नीपेग विजयी हुन पुग्यो। खेल पछि अन्तर्वार्ता क्रममा उनले प्रकास कम हुँदै गइरहेकोले रन रेट बढाउन त्यसरी ब्याटिंग गरेको बताए।
खेलको प्लेयर अफ द म्याच समेत चुनिन पुगेका जेपी डुमिनिले अविजित ८५ रन बनाउन ४१ बलमा ८ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे। ईमरिटले अविजित ३२ रन बनाउन १५ बलमा २ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे।
टोरोन्टोको बलिंगमा सन्दिप लामिछानेले सर्वाधिक २ विकेट ( ४-०-३४-२ ) लिए भने जेरेमि गोर्डन, क्रिस ग्रिन र काइरन पोलार्डले १/१ विकेट लिए।
यस अघि पहिले ब्याटिंग गर्ने क्रममा टोरोन्टोले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २३८ रनको ठुलो योगफल तयार गरेको थियो।
हेनरिच क्लासेनले अविजित १०६ रन बनाउने क्रममा ४९ बलमा ११ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे। यस्तै ओपनर रोडरिगो थोमसले ४० बलमा ७ चौका र ५ छक्का मदतले ७३ रन बनाए। दोश्रो विकेटको लागि थोमस र क्लासेनले १०.२ ओभरमा १३७ रनको साझेदारी गरेका थिए।
विन्नीपेगको लागि बलिंगमा मोमम्मद इरफान र कालिम सानाले २/२ विकेट लिए। विन्नीपेग कप्तान रायड इमरितले ४ ओभरमा ५१ रन खर्चेर पनि विकेट विहिन रहे।
खेलमा सोमपाल कामिले भने अन्तिम-११ मा मौका पाएनन्।